ခုံနံပါတ်(၁၀) နဲ့ လို က် ပါ စီးနင်းလာခဲ့ပေမယ့် အိမ်မရောက်ပဲ ထူးဆ န်းစွာ ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ အသက်(၂၀) အရွယ်ကောင်မလေး…. - Top MM News
alpha | July 14, 2020 | News | No Comments
ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊ ကျောက်မဲမြို့မှာ အသက် (၂၀)နှစ်အရွယ် မိန်းကလေး တစ်ဦး ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ ၂၇ရက်မှ ဒီကနေ့ဇူလိုင်လ ၁၄ရက်ထိ (၁၈)ရက်ကြာ ပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့ သူ့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေထံကနေ သိရပါတယ်..။
ကျောက်မဲမြို့နေ အဖဦးမြင့်လှိုင် ရဲ့ သမီးဖြစ်သူ မအိစန္ဒာကို၊ အသက်(၂၀)နှစ်ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဇွန်လ၂၇ရက်နေ့က နေအိမ်သို့ပြန်လာရာလမ်းမှာ ပျောက်ဆုံးခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်..။
အဲဒီမိန်းကလေး က ဇွန်လ ၂၇ရက်နေ့မှာ လားရှိုးမြို့မှ ကျောက်မဲမြို့သို့ ပြန်လာဖို့အတွက် မိဘထံသို့ ဖုန်းဆက်ခဲ့ပြီး မော်တော်ယာဉ်ဂိတ်မှာ လက်မှတ်ဝယ်ယူကာ ခုံနံပါတ် ၁၀နဲ့ လိုက်ပါစီးနင်းခဲ့ပေမယ့် မိဘထံသို့ မရောက်လာခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်..။
သူလိုက်ပါစီးနင်းလာတဲ့ မော်တော် ယာဉ်ဂိတ်သို့ မိဘတွေမှ သွားရောက်စုံစမ်းရာမှာ အဲဒီမော်တော်ယာဉ် နဲ့ စီးနင်းလိုက်ပါခဲ့ကြောင်း..၊
လိုက်ပါစီးနင်းလာတဲ့အချိန်မှာ သူမ ရဲ့လက်ကိုင်ဖုန်းထံသို့ ဖုန်းနှစ်ကြိမ် ဝင်လာပြီး ဖုန်းပြောဆိုမှု တွေကို တွေ့ခဲ့ရကြောင်း၊ သူမမှ စဥ့်အင်တံတားထိပ်မှာ ဆင်းမယ်လို့ ပြောဆိုကာ ဆင်းကျန်ရစ်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်..။
အဆိုပါမိန်းကလေးကို မိဘ၊ ဆွေမျိုးတွေ လိုက်လံ ရှာဖွေပေမယ့် ဒီကနေ့ထိ ရှာမတွေ့သေးတာကြောင့် အိမ်မှာပူဆွေးသောကရောက်နေကြောင်း သူ့ရဲ့ မိသားစုဝင်တွေက ရွှေတြိဂံဒေသ သတင်းဌာနကို ပြောကြားချက်အရ သိရပါတယ်..။
Credit to သတင်း-နန်းမေရာစု(ရွှေတြိဂံ)
ခုံနံပါတျ(၁၀) နဲ့ လိုကျပါ စီးနငျးလာခဲ့ပမေယျ့ အိမျမရောကျပဲ ထူးဆနျးစှာ ပြောကျဆုံးနတေဲ့ အသကျ(၂၀) အရှယျကောငျမလေး….
ရှမျးပွညျနယျမွောကျပိုငျး၊ ကြောကျမဲမွို့မှာ အသကျ (၂၀)နှဈအရှယျ မိနျးကလေး တဈဦး ပွီးခဲ့တဲ့ဇှနျလ ၂၇ရကျမှ ဒီကနဇေူ့လိုငျလ ၁၄ရကျထိ (၁၈)ရကျကွာ ပြောကျဆုံးနတေယျလို့ သူ့ရဲ့မိသားစုဝငျတှထေံကနေ သိရပါတယျ..။
ကြောကျမဲမွို့နေ အဖဦးမွငျ့လှိုငျ ရဲ့ သမီးဖွဈသူ မအိစန်ဒာကို၊ အသကျ(၂၀)နှဈဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ ဇှနျလ၂၇ရကျနကေ့ နအေိမျသို့ပွနျလာရာလမျးမှာ ပြောကျဆုံးခဲ့ကွောငျး သိရပါတယျ..။
အဲဒီမိနျးကလေး က ဇှနျလ ၂၇ရကျနမှေ့ာ လားရှိုးမွို့မှ ကြောကျမဲမွို့သို့ ပွနျလာဖို့အတှကျ မိဘထံသို့ ဖုနျးဆကျခဲ့ပွီး မျောတျောယာဉျဂိတျမှာ လကျမှတျဝယျယူကာ ခုံနံပါတျ ၁၀နဲ့ လိုကျပါစီးနငျးခဲ့ပမေယျ့ မိဘထံသို့ မရောကျလာခဲ့ကွောငျး သိရပါတယျ..။
သူလိုကျပါစီးနငျးလာတဲ့ မျောတျော ယာဉျဂိတျသို့ မိဘတှမှေ သှားရောကျစုံစမျးရာမှာ အဲဒီမျောတျောယာဉျ နဲ့ စီးနငျးလိုကျပါခဲ့ကွောငျး..၊
လိုကျပါစီးနငျးလာတဲ့အခြိနျမှာ သူမ ရဲ့လကျကိုငျဖုနျးထံသို့ ဖုနျးနှဈကွိမျ ဝငျလာပွီး ဖုနျးပွောဆိုမှု တှကေို တှခေဲ့ရကွောငျး၊ သူမမှ စဉျ့အငျတံတားထိပျမှာ ဆငျးမယျလို့ ပွောဆိုကာ ဆငျးကနျြရဈခဲ့တယျလို့ သိရပါတယျ..။
အဆိုပါမိနျးကလေးကို မိဘ၊ ဆှမြေိုးတှေ လိုကျလံ ရှာဖှပေမေယျ့ ဒီကနထေိ့ ရှာမတှသေ့ေးတာကွောငျ့ အိမျမှာပူဆှေးသောကရောကျနကွေောငျး သူ့ရဲ့ မိသားစုဝငျတှကေ ရှတွေိဂံဒသေ သတငျးဌာနကို ပွောကွားခကျြအရ သိရပါတယျ..။
Credit to သတငျး-နနျးမရောစု(ရှတွေိဂံ)
COVID-19ကာလ စားစရာမရှိလို့ မိသားစုအတွက် ကျောက်ကပ်ထုတ်ရောင်းပြီး ဖြေရှင်းဖို့ကြိုးစားတဲ့ ဖခင်
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကိုဗစ်နဲ့ ပတ်သင့်ပြီး ပြုလုပ်နေတဲ့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့် အလျှော့အတင်း